Nhau dzeBhaibheri: Runyoro Ruri Pachidziro - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Chii chiri kuitika pano? Vanhu vari kudya mabiko makuru. Mambo weBhabhironi akoka vaenzi vanokosha vane chuuru. Vari kushandisa mikombe yendarama neyesirivha nendiro zvakatorwa mutembere yaJehovha muJerusarema. Asi, kamwe kamwe, zvigunwe zvoruoko rwomunhu zvinooneka mumhepo uye zvinovamba kunyora pachidziro. Ari wose anotyiswa.
Bhershazari, muzukuru waNebhukadnezari, ndiye mambo zvino. Anodanidzira kuti vachenjeri vake vapinzwemo. 'Aninani unogona kurava runyoro urwu ndokundizivisa charwunoreva,' anodaro mambo, 'achapiwa zvipo zvizhinji ndokuitwa mubati ushe wechitatu anoisvokosha muumambo.' Asi hapana nomumwe wavachenjeri angarava runyoro ruri pachidziro, kana kuti kududzira revo yarwo.
Mai vamambo vanonzwa ruzha ndokupinda mukamuri guru rokudyira. 'Ndapota regai kutyiswa kwazvo,' vanoudza mambo. 'Muumambo hwenyu munomurume anoziva vamwari vatsvene. Apo sekuru venyu Nebhukadnezari vaiva mambo vakamuita mukuru wavachenjeri vavo vose. Anonzi Dhanieri. Ngaadanwe, uye achakuzivisai chinorehwa nairworwu.'
Nokudaro pakarepo Dhanieri anopinzwamo. Aramba kutora chipo chipi nechipi, Dhanieri anovamba kuzivisa kuti nei Jehovha akambobvisa sekuru vaBhershazari Nebhukadnezari pakuva mambo. 'Aizvikudza zvikuru,' Dhanieri anodaro. 'Uye Jehovha akamuranga.'
'Asi imi,' Dhanieri anoudza Bhershazari, 'maiziva zvose zvakamuitikira, asi imi muchiri munozvikudza sezvaiita Nebhukadnezari. Mapinza muno mikombe nendiro zvakabva mutembere yaJehovha ndokunwiramo. Marumbidza vamwari vakaitwa namatanda namatombo, uye hamuna kukudza Musiki wedu Mukuru. Ndokusaka Mwari atumira chanza kuzonyora mashoko aya.
'Izvi ndizvo zvanyorwa,' Dhanieri anoti: 'MENE, MENE, TEKERI uye UFARSINI.'
'MENE rinoreva kuti Mwari averenga mazuva oumambo hwenyu ndokuhugumisa. TEKERI rinoreva kuti mayerwa pazviyero ndokuwanwa musina kunaka. PARSINI rinoreva kuti umambo hwenyu hunopiwa vaMedhe navaPersia.'
Dhanieri achingunoveri kutaura, vaMedhe navaPersia vatovamba kudenha Bhabhironi. Vanotapa guta ndokuuraya Bhershazari. Runyoro ruri pachidziro runozadzika usikuhwo! Asika chii chichaitika kuna vaIsraeri zvino? Tichakurumidza kuchiwana, asi ngatitangei kuona chinoitika kuna Dhanieri.
Chii chinoitika mambo weBhabhironi paanova nomutambo mukuru uye paanoshandisa mikombe nendiro zvakatorwa mutemberi yaJehovha iri muJerusarema?
Bhershazari anotii kuvarume vake vakachenjera, asi havakwanisi kuitei?
Amai vamambo vanomuudza kuti aitei?
Maererano neizvo Dhanieri anoudza mambo, nei Mwari akaita kuti ruoko runyore pamadziro?
Dhanieri anotsanangura sei zvinorehwa nemashoko ari pamadziro?
Chii chinoitika Dhanieri achiri kutaura?
Verenga Dhanieri 5:1-31.
Siyanisa kutya Mwari nokutya kwakaita Bhershazari paakaona runyoro pamadziro. (Dhan. 5:6, 7; Pis. 19:9; VaR. 8:35-39)
Dhanieri akaratidza sei ushingi hukuru pakutaura naBhershazari nemakurukota ake? (Dhan. 5:17, 18, 22, 26-28; Mab. 4:29)
Dhanieri chitsauko 5 chinosimbisa sei uchangamire hwaJehovha pazvinhu zvose zvakasikwa? (Dhan. 4:17, 25; 5:21)